Qeybtii 5-aad Sheekooyinka lagu soo halqabsado ee murti ahaanta loo isticmaalo
NIMAAN HADLIN HOOYADIIS QADISAY
Maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa isa soo raacay habar dugaag oo ooman, waxay heleen ceel biyo yarood ah, intii ugu xoogga waaweyneyd ayaa waxay damacday in biyaha sida loo kala waaweyn yahay loo kala badsado. Guddi baana arrintaa loo saaray xaalka soo gebagebaysa. Ileyn intii yaryareyd baa saami ka doonayso e. ‘gari laba nin kama wada qosliso e,’ go'aan waxay ku gaareen guddidii in wixii yar-yar ah la oomiyo.
Atoorkii baa yiri: "waar gaal dil, gartiisana sii" isaga oo ka gilgilanaya gardarada. caws ayuu ku cartay oo ku kufay itaalkayga waad aragtaan biyahana heshiiska ma oggoli", atoorkii baa sidaa ku dhaartay oo intuu orday ceelkii is kor taagay "ninkii u xoog roonaada waaba la arki” ayuuna raaciyey", waar intaasay dhaari iga tahay inaan ceelkaas laga cabbin ilaa la isku gooyo (laayo) “gacmihiina maantaan ku jiro ha ii gargaarina e geerida ninkii ii hayaa haygu rido goofo”.
Hanjabaaddii, hadalkii kululaa iyo ficilladii uu muujiyey awgood baa atoorkii lagaga cabsaday oo lagu tixgeliyey halkiina biyihii lagaga qeyb geliyey oo weliba loogu hor mariyey.
1. Maxay ku kulmeen habar dugaag?
2. Maxay intii roorooneyd ku tashatay?
3. Yaase ka dhiidhiyey taladaas?
4. Sidee bay gari laba uga wada qoslin weyday?
5. Dulucda sheekada waa maxay?
1. Nin afle baa abaar ka baxa.
2. Togba taagtii buu rogmadaa.
3. Geesi Alla ma xilo.
Rukum Reerka ku meer
Ina madax minjo ku waalayste
Ayeydey laba qumbay leedahay, midba marbay farta gashataa.
Qoofle-qaxar, wuxuu aad u jeclaa hilibka. Markuu magaalada ka yimaadaba wuxuu soo iibsan jiray Kiilo hilib ah. Hase yeeshee, dhibaato waxay ka dhacday mar allaale marka uu hilibka guriga keeno ayaa haweeneydiisa oo iyana hilibka balaayo ku qabtay, ay haweenka deriska ah intay isugu yeerto dabadeed halkaa lagu wada cuni jiray.
Marka uu hawlihiisa galabtaa ka soo hoydo ee uu guriga yimaado ayuu haweeneydiisa warsadaa hilibkii, iyana waxay ugu jawaabtaa, "Alla, sow bisad baasi iimay soo weydaaran intaan guriga Xadiyo ku maqnaa oo dabadeed hilibkii lamay cararin". Cooflaa iska aamusa oo wixii kale ee uu guriga ka helo intuu afka ku dhufto dabadeed iska seexdaa.
Maalin maalmaha ka mid aha ayuu Coofle arrintaa iyada ah qaadan waayey. Intuu bisaddii ay hafreysay soo qabtay ayuu haweeneydiisiina soo kaxeeyey. Labadiiba siduu u soo waday ayuu dukaan magaalada ku yaalla keenay. Bisaddii buu miisaankii dukaanka dul dhigay oo la miisaamay. Dabadeed, intuu haweeneydiisii eegay, ayuu yiri, "naa hilibkii aan saddexdii cisho ee u dambaysay keenay, saddex kiilo buu ahaa, bissaduna waa saddex kiilo. Haddaba, haddii Bisaddi tan tahay hilibkii aaway?
Qeytbtii 4-aad halkaan ka Aqriso